Fampidirana ny marika
Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2009, ary miorina ao amin'ny tanàna Xiaolan, Zhongshan City, izay fantatra amin'ny anarana hoe Base Hardware Industrial Products China. YALIS dia mpanamboatra vavahady manambatra ny R&D, ny famokarana ary ny varotra.
YALIS amin'izao fotoana izao dia manana tobim-pamokarana mandrakotra velarantany 7.200㎡, miaraka amin'ny velaran'ny faritra manodidina ny 10.000 of ary mihoatra ny 100 ireo mpiasa. Amin'ny taona 2020, YALIS dia handrafitra indray ny fananganana ilay orinasa, ao anatin'izany ny fampidirana ny rafitra fitantanana ISO, ny fanitsiana ny firafitry ny fikambanana mpamokatra, ny fandraisana mpiasa teknisianina ary ny fampidirana fitaovana famokarana mandeha ho azy ho an'ny tsipika famokarana samihafa. Andrasana ny fanitarana ny zavamaniry ary hampiasaina ao anatin'ny 3 taona.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny varavarana tsy hita maso, varavarana hazo aluminium alim-baravarana, varavarana hazo anatiny, varavarana fitaratra manify ary vahaolana amin'ny fampiharana hafa eny an-tsena, YALIS dia nandefa tsikelikely ny vavahady minimalist mifandraika sy ny vatan-kazo fitaratra vita amin'ny vera raha mbola mitazona ny vatan'ny varavarana firaka zinc. tsipika vokatra.
Noho ny fanavaozana ny vokatra dia nohavaozina ihany koa ny efitrano fampisehoana YALIS. Nozaraina ho faritra 5, faritra sehatry ny fampiharana rindrambaiko eo am-baravarana, faritra aseho vokatra vaovao, faritra aseho ny vokatra mahazatra, faritra vahaolana amin'ny fikirakirana varavarana sy ny sehatry ny sehatry ny varotra, izay mampiseho tsara kokoa ny vokatry ny fitaovana am-baravarana eo am-baravarana ary manome mpanjifa tsaratsara kokoa traikefa.
YALIS dia nandalo ny fanamarinana Enterprise avo lenta, fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001, fanamarinana Swiss SGS, fanamarinana TUV Alemanina, fanamarinana EURO EN, ary manana patanty famolavolana maherin'ny 100 sy patanty modely ampiasain'ny am-polony.
Ny toerana YALIS
Misy karazana orinasa na mpamokatra maromaro ao amin'ny indostrian'ny mpikarakara varavarana:
Ny voalohany dia maka tahaka ny endrik'ireo orinasa na mpanamboatra hafa. Ny vokatry ny orinasa na mpamokatra toy izany dia tsy manana endrika vaovao sy ny fahaizana mamorona vokatra vaovao.
Ny faharoa dia ireo orinasa na mpanamboatra izay manolotra fatratra ny alim-baravarana alimika alim-baravarana, vatan'ny varavarana vy na kitapom-by vy. Ireo karazana vokatra ireo dia heverina ho toy ny: be dia be, saropady amin'ny vidiny, ary tsy mila fampandrosoana sy fanavaozana ny vokatra.
YALIS, mpanamboatra solika varavarana firaka zinc ary vahaolana amin'ny fikirakirana am-baravarana, tsy amin'ny fahafaha-mivoatra vokatra ho an'ny karazan-tsokajy sy fampiharana amin'ny varavarana ihany, fa koa amin'ny fahaiza-manao marketing sy fampiroboroboana amin'ny tsena samihafa.
Ny fahatelo dia marika italiana. Vokatra varahina no tena vokatr'izy ireo. Ny marika ataon'izy ireo dia manana laza malaza be eran'izao tontolo izao. Na izany aza, ny vokatra azon'izy ireo dia mety ho an'ny mpanjifa kely --- ny mpanjifa lafo vidy indrindra.
Amin'ny taona 2020, ny YALIS dia handray ny paikady roa amin'ny fanaingoana iraisam-pirenena ny marika sy ny automatisation famokarana ho andalana lehibe amin'ny fampandrosoana. Amin'ny lafiny iray, izy dia hametraka ny tenany ho mpamatsy vahaolana amin'ny rindrambaiko matihanina. Maka an'i Sina ho fotony, manitatra an'i Eropa, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient ary firenena hafa, ary koa manangana ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa hamaha ny alahelon'ny mpanamboatra varavarana sy ireo mpaninjara vahiny. Etsy ankilany, ny orinasa dia nomanina drafitra indray, ary nanampy fitaovana famokarana mandeha ho azy, nampiditra ny rafitra fitantanana ISO, vonona hanompo ny mpanjifa tsaratsara kokoa.
Ao amin'ny 2021, ny drafitra ozinina dia hovitaina ary hivelatra tsy tapaka. Ny fitantanana manara-penitra ny rafitra famokarana sy ny fitaovana mandeha ho azy dia hampitombo ny fahafahan'ny famokarana. Raha ny fahaizan'ny varotra, ny drafitra dia tsy mampiakatra ny ekipa serivisy ekipa ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa fotsiny, fa manampy ekipa fantsona tetikasa ihany koa. Raha manompo ireo mpanamboatra varavarana sy mpaninjara dia afaka mamaly haingana ny filan'ireo mpifanaraka aminy izany. Handeha dingana lehibe i YALIS amin'ny 2021.